Taliye DABAGALE oo Qiray Gal-daloolooyin ka jira Saldhigyada Booliska oo Dib u habayn lagu samaynayo. |
Taliye DABAGALE oo Qiray Gal-daloolooyin ka jira Saldhigyada Booliska oo Dib u habayn lagu samaynayo.
Hargeisa(GNN):-Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Maxamed Aadan Saqadhe (Dabagale) ayaa markii u horeysay muddadii uu xilka hayay ka hadlay cabashooyin ka taagan Saldhigyada Booliska ee dalka iyo qaabka ay u maareeyaan Dacwadaha loo gudbiyo.
Sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi oo ka hadlayey kulan ay isugu yimaaddeen Taliyeyaasha Ciidamada Booliska gobollada oo lagaga hadlyey kor-u-qaadidda adeegyada saldhigyadu u qabtaan dadweynaha iyo sida ay dacwadaha uga garnaqaan ama u maareeyaan, waxa uu sheegay in fiiro gaar ah loo yeelanayo dacwadaha saldhigyada Booliska soo gala iyo qaabka ay u shaqeeyaan Saraakiisha gacanta ku haysa taliska Saldhigyada Booliska ee dalka.
Waxa uu taliyuhu sheegay in dhibaatada ugu weyn ka taagan cabashooyinka bulshadu ay tahay hab-dhaqanka saraakiisha qaabilsan Baadhista Kiisaska Saldhigyada soo gala.
Warkan oo faahfafahsan ka daawo Muuqaalka Hoose
Dhawaan ayay ahayd markii taliyaha Booliska Somaliland warbaabinta iyo Baraha bulshada loo mariyey baaqyo xambaarsan dhibaatooyin ka jira saldhigyada Booliska dalka, kuwaas oo taliyaha loogu baaqay inuu si deg-deg ah wax uga qabto.